स्टेनलेस स्टील multistage अपकेंद्र पंप लागि स्थापना टिप्पणीहरू - चीन शाङ्घाई सर्च पंप्स
स्टेनलेस स्टील multistage केन्द्रापसारक पम्प लागि स्थापना नोट्स:
1 को स्टेनलेस स्टील multistage अपकेंद्र पम्प स्थापना प्रविधि देखि, को चूषण पाइप एक सख्त छाप अवस्था, पाइप लिक वा रिसाव हुन सक्दैन, अन्यथा यो पंप को पानी उपखाडी मा निर्वात डिग्री नष्ट हुनेछ पम्प पानी उत्पादन हो कारण आवश्यक कम वा त्यो अत्यन्त गम्भीर पानी आकर्षित गर्न हुनेछ। तसर्थ, हामी उत्कट राम्रो काम गर्ने पाइपलाइन को इन्टरफेस मा पाइपलाइन जडान निर्माण गुणस्तर सुनिश्चित गर्न के गर्नु पर्छ।
2. यो औंल्याए पर्छ भनेर जब टाउको र स्टेनलेस स्टील multistage अपकेंद्र पम्प र पाइपलाइन अपकेंद्र पम्प स्थापना को पानी तापमान स्थानीय उचाइमा 300 मिटर भन्दा बढि छ वा पम्प्ड पानी तापमान 20 नाघ्यो भने, प्रयोगात्मक अवस्था फरक हो सेल्सियस डिग्री छ, को गणना मूल्य सही गरिनेछ। कि, अलग elevations मा वायुमण्डलीय दबाव र 20 डिग्री Celsius.However को पानी तापमान माथिको संतृप्त वाष्प दबाव, पानी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तल छ जब संतृप्त बाफ दबाव नगण्य हुन सक्छ।
3. पंप स्थापना उचाइ (अर्थात् चूषण) पुष्टि गर्न। यो उचाइ पानी सतह र पंप प्ररित गर्नेवाला को केन्द्र-लाइन बीच ठाडो अन्तराल बुझाउँछ। यो उपयोगी चूषण उचाइ संग भ्रमित हुन अनिवार्य छ। पानी पम्प उत्पादन elucidation पुस्तक वा नाम पटरी मा अनुमति दिइएको निर्वात उचाइ पानी पम्प को उपखाडी खण्ड मा निर्वात मूल्य संकेत गर्छ। यसलाई सामान्य वायुमण्डलीय दबाव अन्तर्गत प्रयोग र 20 डिग्री सेल्सियस को एक पानी तापमान रोक मापन गरिएको थियो। यो चूषण पाइप मिलान भएपछि पानी प्रवाह विचार गर्दैन। पंप एकाइ को उचाइ भएको निर्वात उचाइ भएको चूषण पाइप को चूषण लाइन को हानि पछि कटौती गर्न अनुमति पछि बाँकी स्थानीय मूल्य हुनुपर्छ। पंप एकाइ को उचाइ भएको गणना मूल्य भन्दा बढी हुन सक्दैन। अन्यथा, पानी पम्प पंप छैन।
4 को गणना मूल्य को प्रभाव चूषण पाइप को पाइप प्रतिरोध गर्न -loss कारण टाउको छ। त्यसैले, यो छोटो पाइपिंग व्यवस्था अपनाउने र धेरै सकेसम्म कुहिनो फिटिंग स्थापना गर्न उचित छ। यो पनि उचित पाइप मा प्रवाह दर कम गर्न केही calibers संग पाइप व्यवस्था गर्न कल्पना छ।